Huawei P Smart Z: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Huawei P Smart Z: Huawei nke mbụ nwere igwefoto nwere ike iwepụ
Febọchị ole na ole gara aga The mbụ nkọwa banyere Huawei P Smart Z e leaked. Ọ bụ ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China na ọnụego ya dị n'etiti. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ a na-eju ya anya site na imepụta ya, ebe ọ bụ na ọ ghọrọ ekwentị mbụ nke ika ahụ na iji igwe na-adọpụ adọpụ. Ekwentị a bụ njedebe na njedebe, mgbe emechara ya na Amazon Italy.
Yabụ na anyị enwetela nkọwa zuru oke nke ekwentị a. E gosipụtara ya dịka ezigbo nhọrọ ọzọ dị n'etiti etiti, dị ka P30 Lite. Karịsịa, imepụta ya na igwefoto dị n'ihu bụ ihe na - emegharị Huawei P Smart Z. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị?
N'ihi iji igwefoto a, ekwentị na-egosipụta atụmatụ ihuenyo niile. Yabụ na okpokolo agba ihuenyo dị ezigbo nro ma nye gị ohere iji ihu nke ngwaọrụ ahụ n'ụzọ ka mma. Yabụ na ọ dị iche na ụdị ndị ọzọ nke akara ndị China na nke a. Na mgbakwunye na ịgbaso otu n'ime usoro ahịa ugbu a na gam akporo.
1 Nkọwapụta Huawei P Smart Z
Nkọwapụta Huawei P Smart Z
Nke a Huawei P Smart Z na-ezute ọtụtụ akụkụ anyị na-ahụ taa na etiti kachasị elu. Karịsịa ihe nhazi ya bụ akụkụ kachasị ike na ya. Igwefoto na-arụ ọrụ nke ọma na n'ozuzu na-eji ezi mmetụta. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ezigbo ihe nlereanya na nke a. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ekwentị:
Ihuenyo: LCD 6,59-inch na mkpebi FullHD + (2.340 x 1.080 pikselụ) na 19,5: 9 ruru
Nchekwa ime: 64 GB (Gbasaa ruo 512 GB na microSD)
Rear igwefoto: 16 MP nwere oghere f / 1.8 + 2 MP
Igwefoto n'ihu: 16 MP nwere oghere f / 2.2
Njikọ: Dual 4G, WiFi 5, Bluetooth 4.2, ụdị USB C, 3,5mm Jack
Ndị ọzọ: Rear akara mkpisiaka agụ, Face Kpọghe, NFC
Ekwentị jikọtara ugbu a na-achọ nnukwu ákwà, na-agbanye 6,5 sentimita asatọ na nke a. Chinesedị ndị China na-eji ihuenyo LCD na ngwaọrụ ahụ, yana mkpebi Full HD +. N'ime anyị na-ahụ Kirin 710F processor, nke na-abịa na otu 4/64 GB RAM na nchikota nchekwa. Batrị ya bụ ike ọzọ nke ngwaọrụ ahụ, yana ikike nke 4.000 mAh na nke a, nke na-ekwe nkwa nnwere onwe dị mma. Karịsịa na njikọ ya na nhazi ya na ọnụnọ gam akporo achịcha na ekwentị.
Huawei P Smart Z na-abịa na igwefoto azụ abụọ, 16 + 2 MP. Ọ bụghị ike kachasị na akara ahụ na-ahapụ anyị, mana ọ na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ dị mma. Tụkwasị na nke ahụ, dị ka ọ bụ omenala maka ụdị ahụ, a na-ewebata ọgụgụ isi n'ime ha. Na azụ ekwentị anyị nwere akara mkpisiaka aka. Anyị nwekwara akpọchi ihu na ngwaọrụ. Anyị na-ahụkwa NFC, iji nwee ike iji ego ịkwụ ụgwọ na ya. Akụkụ nke anyị anaghị ahụ mgbe niile na ekwentị ndị China.
N'oge a, etinyela Huawei P Smart Z a na Amazon Italy, ọ bụ ezie na awa ole na ole ewepụrụ ya. Ma ekele maka nke a ọ dịla mfe ịmara na ngwaọrụ ahụ a ga-ebido na mba ahụ na May 6. Yabụ naanị ị chere ụbọchị ole na ole ka ewepụta ya na nzuzo. Ọ bụ ezie na ka ọ dị ugbu a, enwetabeghị nkọwa banyere mmalite ya na ahịa ndị ọzọ. Ọ gaghị ewe oge iji bụrụ onye isi.
Anyị na-achọta otu ụdị ekwentị na usoro RAM na nchekwa dị n'ime. Ọ bụ ezie na enwere ike ịzụta ya n'ọtụtụ agba: acha anụnụ anụnụ, nwa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ya mere ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ nhọrọ kachasị amasị ha banyere ngwaọrụ a. Banyere ọnụahịa ya, ga-abụ 279,90 euro na Italytali. Anyị amaghị ma ọ ga-enwe otu ọnụahịa na ahịa ndị ọzọ, mana ọ ga-adị ka ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P Smart Z: Huawei nke mbụ nwere igwefoto nwere ike iwepụ
Hazichara ọnụahịa nke Google Pixel 3a na Pixel 3a XL